I-MetaCX: Lawula ii-Lifecycle zabaThengi ngokuBambisana ngokuThengisa ngokuSisiseko | Martech Zone
I-MetaCX: Lawula ii-Lifecycle zabaThengi ngokuBambisana ngokuThengisa ngokuSisiseko
Lwesine, Okthobha 1, 2020 Lwesine, Okthobha 1, 2020 Douglas Karr
Kwisithuba seminyaka elishumi eyadlulayo, ndisebenze neetalente ezintle kwishishini le-SaaS- kubandakanya ukusebenza njengomphathi wemveliso kaScott McCorkle kunye neminyaka emininzi njengomcebisi wokudibana esebenza noDave Duke. UScott wayengumvelisi ongakhathaliyo owayekwazi ukutsiba kuwo nawuphi na umceli mngeni. UDave wayengumphathi weakhawunti otshintshayo owanceda imibutho emikhulu kwihlabathi ukuqinisekisa ukuba kulindelwe ukuba kulindelwe.
Akumangalisi ukuba aba babini badibene, baphanda ubunzima kwintengiso ye-B2B, ukuphunyezwa, kunye nokuxhamla kwabathengi… kwaye beza nesisombululo, IMetaCX. I-MetaCX liqonga elakhelwe ukuqinisekisa ukuba abathengi kunye nabathengisi basebenzisana ngokucacileyo ekubaleni, ekulandeleleni nasekugqithiseni iinjongo zeshishini lomthengi.
Isishwankathelo seMetaCX yeMveliso
Abathengi kwi-SaaS kunye neenkampani zeemveliso zedijithali baziva bengazithembi ukuba izithembiso zentengiso ziya kugcinwa. Kwenzeka ntoni emva kokuba isivumelwano sityikityiwe?
IMetaCX yakhe iqonga eliguqula indlela abathengisi nabathengi basebenzisana ngayo kwaye baphumelele kunye. I-MetaCX ibonelela ngendawo ekwabelwana ngayo apho abathengisi kunye nabathengi banokuchaza kwaye balinganise iziphumo kunye, ukulungelelanisa ukuthengisa, impumelelo, kunye namaqela okuhambisa malunga nefuthe lokwenyani elibonwa ngabathengi.
Iqonga lokusebenzisana phakathi kwabathengi nabathengisi libonelela:
Izicwangciso zempumelelo -Ukuqinisekisa ukufezekiswa kweziphumo ezinqwenelekayo zeshishini ngokwenza isicwangciso senyathelo ngamanyathelo somthengi ngamnye.
itemplates -Uvelise iitemplate zesicwangciso sempumelelo ezilungiselelwe iimeko ezithile zokusetyenziswa kunye nee-personas ukwenza lula kunye nokulinganisa ukuthengisa okusekwe kwiziphumo kunye nempumelelo.
Izaziso -Yaziswa xa ithemba okanye umthengi ejoyina ibhulorho owabelwene ngayo okanye onxibelelana nayo nayiphi na into yebhulorho ukuze usabele ngexesha lokwenyani.
Moments -Bhiyozela amaxesha aphambili kumjikelo wobomi wabathengi-ubuhlakani obutsha, ukumiliselwa okugqityiweyo, kunye nokusayinwa kokutyikitywa ukuze babone amandla okuqhubela phambili.
Amanqanaba obomi -Yila isicwangciso sempumelelo esihambelana nayo yonke inqanaba lobomi beebhayisekile ukuqinisekisa ukuba wena kunye nabathengi bakho nihlangabezana neenjongo zexesha elifutshane nelide.
Izandla -Jonga ngeso lengqondo i-handoff ngaphakathi kwe-MetaCX ukuqinisekisa ukuba wonke umntu ukwiphepha elinye kwaye usebenzela iinjongo kunye neenjongo ezifanayo.
Iibhlorho -Mema abathengi kunye nethemba kwindawo ekwabelwana ngayo enendawo apho unokubhala khona kwaye usebenzisane kwizicwangciso zempumelelo.
Teams -Zisa amava abathengi ebomini kwaye uqale ukusebenzisana nabachaphazelekayo ngokudala amaqela abantu ahambelana nawo onke amabakala obomi.
Isilumkiso sokugcina -Fumanisa umngcipheko wokugcina ngokufihla isenzo esithile kunye nokuziphatha okutyhila abathengi abasele beza kuthi gqi.
Zonke iziphumo kwisicwangciso sempumelelo seMetaCX zibotshelelwe kwiimpawu eziphambili kunye neemetrikhi ezisebenzisa idatha ukulandelela impumelelo yesiphumo kulo lonke ixesha lokuphila kwabathengi.
Iziphumo ezinyanyekelwa ngabathengi bakho ziya kuba nefuthe kuhlobo lwedatha oyitsalelayo kwi-MetaCX. Ungatsala imicimbi kwimveliso yakho okanye kwenye inkqubo kubandakanya iCRM yakho, inkqubo yezemali, okanye iqonga lomsitho. Nje ukuba iinkqubo zakho zeshishini zondle imicimbi eqongeni ngonxibelelwano, iMetaCX isebenzisa iikhrayitheriya kunye nexesha elibekiweyo olichazayo ukukuxelela ukuba umthengi usondele kangakanani ekufezekiseni impumelelo.
Tune kwi yam Martech Zone Udliwanondlebe nePodcast kwincoko ezayo noMongameli weMetaCX uJake Sorofman.
Ukulungele ukubona iMetaCX isebenza? Bhalisa namhlanje kwaye iqela liya kubonelela ngedemo yeqonga.
Cela iMemoCX yeDemo
tags: kpisIntengiso yobomi bemisontoizigaba zobomi bomjikelo wobomimetacxukukhwelaii-saasubomi be-saasulawulo lwe-saas lifecylceUkunika amandla ukuthengisaukucwangcisela impumelelo